Shiinaha Jirdhiska Jirdhiska Ciyaaraha Dheer ee Haweenka T-Shirt PY-CT002 Soo-saar iyo Warshad | Pinyang
jimicsiga jimicsiga dumarka gacmo dheer
Sidee loo doortaa funaanad dharka isboortiga ah?
1. Dheer oo dhuuban
T-shirt dharka-V-qoorta ah ayaa jidhka oo dhan u oggolaan doonta hawo badan, cilladaha khafiifka ah ee faa'iidada leh, oo aad u muuqda. Hadda dhammaan quruxda caatada ah ee caanka ah, quruxdaan qof walba ha arko, ha dooran nooca dabacsan ee funaanada, tani waxay u muuqan doontaa mid khafiif ah.
T-shaati oo leh funaanad ku dhow dhow oo qoorta ku wareegsan ayaa ah tan ugu habboon jirka noocan ah. Qoorta wareegsan waxay u muuqan doontaa mid caato ah, guud ahaan "sare" aad ayaa loo kala bixiyay. Ha u maleynin inaad yartahay, waa inaad sifiican iskuxirataa, taas oo gadaal kadhigi doonta. Sida ugu wanaagsan ee loo lebisto waa in la waafajiyo.
Dharka funaanadaha fudud ee dabacsan ee aan lahayn dhexda ayaa ku habboon qaabka jirka ee ragga buuran. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la hubiyo faahfaahinta xarkaha qoorta marka la xulanayo ku habboon ee funaanadaha isboortiga. Doorashada qoorta weyn waxay ka dhigi kartaa qoorta mid fudud. T-shaati-ga yar ee V-neck-ka ah kuma habboona, V-neck-ka weyni waa ka fiican yahay. V faham wuxuu ka dhigayaa ragga buuran inay u muuqdaan kuwo bararsan.
Guud ahaan dooro qaabka garabka, mid fudud oo deeqsinimo leh, moodel iyo iswaafajin, ku habboon dadka nooc kasta ha ahaadee.
Isticmaalka badeecada: shaatiyadaha xayeysiinta, dharka kooxda, habeynta shaqsiyeed, iwm, ayaa habeyn kara midabka, qaabka, astaanta.
1.Q: Waa maxay habka maraakiibta?
J: Jidka loo maro. Sida fedex, dhl, tnt iyo wixii la mid ah; hawada, badda. Qiimaha rarka waxaa lagu go'aamiyaa dhoofinta dariiqyada & miisaanka alaabta & mugga dhabta ah iyo cinwaankaaga oo faahfaahsan.
2.Q: Waa maxay habka Bixinta?
A: Waxaan taageernaa habka lacag bixinta ee kala duwan (T / T, Visa card, Western union, Moneygram, Secure pay-Escrow, iwm) T / T
3.Q: Miyaan daabacan karnaa calaamadeena ama astaantaada alaabtaada?
J: Haa, waa ku faraxsanahay inaan ka mid noqono soo saarahaaga OEM ee Shiinaha si uu ula kulmo shuruudahaaga OEM.
4.Q: Maxay badeecadaha qaar u leeyihiin farqiga u dhexeeya sawirka bogga iyo waxyaabaha la taaban karo?
J: Sababta oo ah kala duwanaanta iftiinka iyo biraawsarka, sidoo kale dufcado kala duwan, maaddada waxaa laga yaabaa inay ku kala duwanaan yar yihiin. su'aal, fadlan noo sheeg intaadan dalban oo si cad u weydii.
5.Q: Soo celinta iyo soo celinta siyaasadda
1.Waxaan aqbalnaa kaliya dib u noqoshada iyo soo celinta dhibaatada tayada, sida googoynta, godadka, oo aysan ku jirin wax waxyeelo ah oo bini-aadamku sameeyay kadib markii la isticmaalo.
2.Pls nala soo xiriir sawirro 3 maalmood gudahood ah ka dib markaad hesho amarka haddii ay jiraan waxyeello.
3.Pls waxay xaqiijineysaa in mawduucyada dib-u-noqoshada ay la socdaan xirmooyin asal ah, sumado / hangtags, maydhasho iyo uskag la'aan.
4. Lacag celin ayaa la sameeyaa haddii kaliya bedelka aan la heli karin. Laakiin kharashka dhoofinta ee alaabada la soo celiyay, iibsadayaasha ayaa mas'uul ka noqon doona.
5. Waxaan kula tacaali doonnaa dhibaatooyinkaaga 3 maalmood gudahood kadib markaad noo soo dirto fariinta
Hore: Dharka Diagonal Dharka Dharka dhaadheer ee Haweenka T-Shirt PY-CT004
Xiga: Jilicsan Cotton Long Sleeve Women T-Shirt PY-CT001
Fashion diagonal dharbaaxo Long darafta Women T-Sh ...